Qisadii Wiilkii Yaraa ee Reer Miyiga ahaa SAAHIR Iyo Waxyaabihii Uu Rassuulka SCW Ka Maqlay.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: April 12, 2016, 1:22 pm
SAHIR wuxuu ahaa Nin Reer Miyi ah oo aan Alle Qurux Weji ku Irsaaqin, Cadceedii Kululayd ee Jasiratal Carabna Gubtay oo Madow Xigeen noqday, Dharkiisa iyo Jirkiisana Diif iyo Dacdaro ka Muuqato.
Sahir wuxuu Maqlay inuu Rasuulka CSW, uu Dadku ugu yeero Hanuun, Aabihii ayuuna Weydiistay inuu Medina tago oo soo dhageysto, Aabihiise waa ka Diiday, wuxuuna ku yiri sidee u heleynaa oo inaad la Fariisato yaa kuu Oggonaayo.
Sahir wuxuU yiri Aabe i Fasax waxaan Maqlay waa Nin aan Dadka iska weynayn oo Qof kastoo u Qasdiya la Fadhiista oo Dhegaysta.
Sahir Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Madina soo galay, Dadka ayuu Weydiiyey waxa loo sheegay inuu Gurigiisa ku jiro. Sahir Gurigii Rasuulka CSW, ayuu yimi oo Albaabkii soo Garaacay, Rasuulkaa ka Furay oo intuu soo Dhoweeyey Qqalkii soo Geliyey oo Fadhiisiyey. Markaasu Sahir yiri:- Mohamedow ii sheeg waxaad Dadka ugu yeertid, markaasa Rasuulku Islaamka u sheegay uguna yeeray, Quraana ku Dul akhriyey, Isla Goobtiiba Sahir Islaamkuu ku qaatay, markaasu Rasuulka CSW, Gacanta u Dhiibay isagoo Balan qaaday inuu Diinta Fulinaayo, Rasuulka ayey is Macasalaamayeyn si uu Baadiyihiisii ugu laabto.
Sahir Rasuulka CSW, aad ayuu u Jeclaaday, mana uu Dhaafi jirin mar kasta uu Magaalada yimaado inuu Rasuulka CSW, u tago oo la soo Tukadu, isagoo Rasuulkana u geynaayo wuxuu Miyiga ka keenay iyo Kaftanka Reer Miyi ee Qosolka leh, Rasuulkuna aad buu u jeclaa, markuu Sahir soo noqonayo Rasuulka CSW, wuxuu soo siin jiray Hadiyad ah Alaab Magaaleed.
Maalin ayaa RasuulkaCSW, Suuqa soo galay, mise waa Sahir oo iibinaaya Alaab uu Miyi ka keenay, Rasuulka CSW, Dhabarka kaga yimi oo intuu Qabtay jirkiisa ku dhejiyey, iyadoon Sahirna arkeynin Qofka haya, markaasuu ku Qayliyey war i sii daa.
Markuu Arkay inuu Rasuulkii Alle yahayna aad buu u Farxay.
Rasuulku Sahir wuxuu ku jeclaa Iimaankiisa Dhabta ah, iyo Akhlaaqdiisa Wanaagsan, waayo Rasuulka CSW, ma Qiimayn jirin waxa Dadku eego oo Dhalaal Aduun ah.
Hadiyada Sahir keeno oo Sixin yar iyo Solay Hilib ah, Rasuulku waa ka Aqbali jiray isagoo Raashin iyo Dhar Magaalo ugu Bedelaayo, wuxuuna Rasuulku oran jiray:- Sahir waa Miyigeenii Anaguna Magaaladiisii baan nahay.